Maxaa sababay in qurba-joogta Itoobiya ay dalkooda ku soo laabtaan? - BBC News Somali
Boqolaal qof oo reer Itoobiya ah oo qurba-joog ahaa ayaa haatan ku laabanaya dalkaasi ka dib isbadalladii siyaasadeed ee uu dalkaasi ka dhaqangeliyay ra'iisalwasaare Abiy Axmad.
"Qof waliba hadda wax wanaagsan ayuu kuu sheegayaa. Waxaan xasuustaa waayadii hore dadku ma aysan wada hadlayn ... laakiin hadda waxaad arkeysaa isbedel badan oo dhanka wanaagsan ah, kaasi oo ah in dadku ay qaddarinayaan xaalka wanaagsan ee dalka uu wajahayo"ayuu yiri Abiy Bister.
Itoobiya waxay leedahay mid ka mid ah dhaqaalaha ugu kobaca badan adduunka, haseyeeshee sidoo kale waxay leedahay tiro badan oo dhallinyaro ah oo shaqo la'aan ah.
Dadka ka faa'iidaysanaya isbeddelkaasi waxaa ka mid ah Yohannis Gebreyesus oo caan ku ah cunno karinta. Ka dib wax kabadan siddeed sano oo uu wax ka baranayay kana shaqeeynayay Mareykanka iyo Faransiiska, waxa uu haatan ku laabtay Itoobiya, halkaa oo uu ganacsi ka billaabay.